Skeleton - ezemidlalo. Skeleton - ezemidlalo-Olympic
Ezemidlalo Ukufaneleka, Imidlalo Eyingozi
Skeleton - umdlalo esakhiwa ngo Uzalo elele ngesisu sakhe ku isihlibhi dvuhpolozevyh umsubathi phezu umshushuluzo ice. Prototype imishini yesimanje ezemidlalo - kodoba satsa Norwegian. Owinile nguye e esikhathini esifishane, uya ibanga.
Ulwazi lokuqala mayelana imincintiswano Luge esukela emuva ekuqaleni kwekhulu nesishiyagalolunye, lapho izivakashi Okhahlamba LwaseSwitzerland British Uzame ukuya phansi isihlibhi ehla intaba nemithambeka eneqhwa. Skeleton - Ngo-1883, e-Swiss ski resort, manje eselaziwa zonke usomabhizinisi, umncintiswano wokuqala wezizwe efana namuhla umdlalo okuthiwa ayehlelwe. Isithombe ezivela emaphephandabeni wangaleyo nkathi ukukhombisa ukuthi isihlibhi yekhulu nesishiyagalolunye kwakuhluke kakhulu kulokho lanamuhla. Ngemva kweminyaka eminingana, eyiNgisi ngu nesibongo Ingane wamangaza kakhulu ozakwabo entsha imishini design ezemidlalo. He enza it kusuka yensimbi kokuba ububanzi mayelana amabili nambili amamilimitha angu.
Yingaleso sikhathi-ke kwaba khona igama "skeleton", okuyinto uhumusha kusuka esiGrekini ngokuthi "skeleton", "skeleton". Igama wanamathela kahle. Skeleton abangenalo ayo, ifakwe kwesamba Uhlaka ubude 70 futhi 38 amasentimitha ububanzi ogibele komzila steel. Uzalo umsubathi wakhe amanga kubheke phansi, usebenza usebenzisa spikes ekhethekile izinzwani izicathulo ezenziwe.
Skeleton kuyinto ezithakazelisa kakhulu, kodwa ngesikhathi esifanayo hhayi sport ezivamile kakhulu. Umlando yomsuka nokuthuthukiswa esikhathi esifushane. Ngo-1905, owokuqala ezemidlalo mncintiswano phezu olusuka entabeni isihlibhi ayehlelwe ngaphandle kwe-Switzerland - ezintabeni Austria Styria. Ngonyaka olandelayo kwaba khona ubuqhawe wokuqala wezwe lonke skeleton. Ngemva kweminyaka eyisikhombisa, ekuqaleni 1912, eJalimane, kuhlangene iqembu labasubathi ezimbili sidalwe: hockey kanye skeleton, futhi ngemva konyaka ezweni elifanayo laqala ukuqhuba tournaments evulekile. I-Russian ebusika umdlalo - skeleton - kancane kancane waqala sandile esifundeni Kaliningrad. Nokho, kweMpi Yezwe Yokuqala isikhathi eside ehlile ukuthuthukiswa yayo emazweni ase-European. Kwakungenxa nje ngo-1921 eduze kwaseSt Moritz wakwazi une-ubuqhawe evulekile ekwehleni ku isihlibhi.
Skeleton - ezemidlalo kuyingozi ngempela. Phakathi Uzalo kuya isihlibhi yashesha ukuba ngesivinini. Uma beqhathaniswa Bobsleigh skeleton ukuphoqelela nezimfuneko ezibophayo kakhulu. Isimo eyinhloko ukuthi isisindo umsubathi ngamadoda sledge kumele singeqi 115, futhi abesifazane - 92 kilograms. Kwezinye izimo, imithetho bavumelekile umthwalo isikebhe sizinze isihlibhi.
Ngokusho imithetho amiselwe engaphezu kweyikhulu edlule, i-mncintiswano ithrekhi ngalolu hlobo ezemidlalo nangokuthi isihlibhi, kumele ehambisana namazinga adingekayo. Eyokuqala ikota ikhilomitha umzila kufanele ngendlela yokuthi anganikeza Luger zisakaza ukuba engamakhulu amakhilomitha ngehora. I last eziyikhulu namashumi noma eziyikhulu namashumi ayisihlanu amamitha ibanga kufanele luthi ukutsheka ukuze degrees nambili. Lokhu kwenziwa ukuze, kokuqeda, umsubathi zingayeka ngokuphepha. Ngaphezu kwalokho, bonke Luge amathrekhi ngamazwe, lapho skeleton mncintiswano, kokuphakama kusukela starting line kanye sekugcineni iphuzu kumelwe ube amamitha ayikhulu noma ngaphezulu. Ukuze uqhathanise, omunye Ungacabanga ukuthi umsubathi uya phansi isihlibhi encane ilele esiswini sakhe ikhanda phambili ngesivinini ovela ukuphakama kwebhilidi 33-storey.
Imithetho International-Olympic mayelana skeleton unamalungiselelo embalwa eyinhloko. Okokuqala, lo mncintiswano kwalolu hlobo ezemidlalo kuyadingeka ukusebenzisa Luge ithrekhi Bobsleigh nge obuphelele ubuncane 1,200 amamitha, futhi esiphezulu - 1650 amamitha. Ekuqaleni ukufika skeletonschik sprints ukusebenzisa (ukusheshisa obuphelele - 25-40 amamitha) bese isisu phansi ikhanda phambili ngokushesha ewela isihlibhi futhi ithrekhi cishe flying. Umsubathi kumelwe siyibonakalise esibekiwe, izingalo welulela kanye umzimba.
aseqala Skeleton kuma-Olympics
Wonke umuntu uyazi ukuthi lolu hlaka lwamathambo - umdlalo-Olympic. Futhi seziqalile ukusetshenziswa wakhe ngesikhathi Winter Imidlalo okufanayo St Moritz kakade 1928. I indondo yegolide okokuqala won ke omele wase-United States Jennison Heaton. Iminyaka engamashumi amabili kamuva, edolobheni elifanayo ngo-1948, lolu hlaka lwamathambo kwaphinde limenyezelwe uhlelo mncintiswano. Kusukela ngo-1969, lo mncintiswano waqala ukuthatha indawo ngezigaba eziningana, ehlakazekile esiyizinyanga ezinhlanu, njengoba kulokhu, umphumela wokugcina engaphansi kancane esimweni sezulu.
Isinyathelo esibaluleke kunazo zonke emlandweni umdlalo kwaba emnyango wakhe ku-International Federation of Bobsleigh futhi Skeleton. Ngo-1982 waba ngowokuqala World Cup skeleton eSt Moritz. Kwathatha abasubathi eziyishumi kusuka emazweni eziyisikhombisa European. Skeleton - umdlalo ukuthi manje asathuthuka emazweni amaningi emhlabeni wonke, kuhlanganise eRussia. Basuke wahlanganyela emazwekazini amane. Ekupheleni kwekhulu leminyaka elidlule, International School of the skeleton ababeqeqeshwe hhayi kuphela abadlali, kodwa futhi abaqeqeshi ezifundeni ezihlukahlukene. ngisho nezinhlelo ezikhethekile zenzelwe.
Kanye mncintiswano ngesikhathi seNdebe yoMhlaba yi-International Federation enziwa minyaka yonke izigaba mqhudelwano ngaphansi kwegama "Tyrol Cup", okuyinto Ungazama ngesandla sabo namanje abasubathi intsha nabangenakho okuhlangenwe nakho. Skeleton - umdlalo lapho baseMelika zinhle ikakhulukazi. Ngakho, ngo-2002 ngesikhathi Winter Olympic ngo-Salt Lake City yesikhulumi elathunjwa ngokuphelele Sebawoti, abameleli United States iwine zonke imiklomelo.
Downhill ku isihlibhi okwamanje uhlela futhi yengamela ukukhiqizwa kokudla okungokomoya-International Federation of Luge. Skeleton - umdlalo othandwayo namuhla emhlabeni wonke. Baze bahlanganyele emazweni anjalo ashisayo, njengaleli laseNingizimu Afrika, e-Australia futhi eMexico. ERussia, wathola yokwanda esebenzayo nje eminyakeni embalwa edlule. Nokho, ngo-2001, abasubathi Russian bakwazi ukubonisa imiphumela kamnandi e tournaments ezinkulu zamazwe ngamazwe.
Skeleton ezweni lethu
Ngo-2002 Ekaterina Mironova - ukhukhuva skeleton labesifazane kazwelonke - zibalwa lwesikhombisa ngesikhathi Imidlalo Salt Lake City. Futhi ngonyaka ozayo ngesikhathi World Championships kulo mdlalo kuba, ngokuwina nayo lendondo yesiliva, usetha irekhodi elisha kule ukusheshisa ithrekhi. Medal kule skeleton ngesikhathi abasubathi Russian phambi kwakungeyona. Ngo-2008, isakhamuzi Russian Alexander Tretyakov umncintiswano we World Cup, owawuse-Igls, wakwazi futhi usethe irekhodi Yiqiniso, wawina indondo esiliva. Ngo-2009, wathatha indawo yokuqala World Cup. Ngesikhathi Sochi Olympic kulo nyaka Tretyakov, iwine ukuthi uzothatha indondo yegolide, ekubeni iqhawe kuqala-Olympic e-skeleton, eyayintula ithuba lokuwina, ngokuba elisezingeni iqhawe emhlabeni eyayibusa. abasubathi Russian ungazange spoilt abalandeli babo ukunqoba, kodwa Olympian zamanje ngiyikhiphile izindondo zethu izwe ezimbili-Olympic. indondo Okwesibili yezwe - a zethusi - kwabesifazane iwine Elena Nikitina. Kunethemba lokuthi lolu hlaka lwamathambo emuva isikhathi eside futhi sina. Manje, uma ugijimela toboggan Kwakhiwa zonke inhlokodolobha-Olympic, uvele bayaqiniseka ukuthi ezemidlalo ayisaxhunyanisiwe zinyamalale!
Irekhodi emhlabeni-push-ups. Ezinye ubuqili umsebenzi
Bungee ukweqa: adrenaline okwandisa
Uhlolojikelele nezifinyezo. "Izingane Underground"
Indlela esiphatha ngayo cystitis.
I-Pedantry - iyini: uthando lomyalelo noma umphumela omubi?
Indatshana phezu ifilimu "Wezingane Ezemidlalo School." Imibono kanye Izincomo
Ilindele ingane. Njengoba sokuvuselela igazi ukwazi ubulili wosana?
Amazwi amahle kakhulu
Lake Vella esifundeni Novgorod